www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City - VOTE: कसलाई भोट हाल्नुभो ? चुन्नुहोस् एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष USNepalOnline.Com: Live from the capital of the world-New York City !
We have 6448 guests and 100 members online
Members : 60531
Content : 7387
Content View Hits : 38396996
VOTE: कसलाई भोट हाल्नुभो ? चुन्नुहोस् एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष
Select Poll	 Selectapoll from the list2009: What Should be written in Nepal's new constitution?2009: सेनापति बिबादमा कस्को भूमिका गलत छ?2009: प्रचन्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर ठीक गरे कि बेठिक ?2009: को प्रधानमन्त्री बन्दा ठीक होला?2009: नयाँ सरकार संबिधान नबनुन्जेल पुरा समय टिक्ला ?2009: नेपालको झन्डा कस्तो हुनु पर्छ ?2009: भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ?2009: नयाँ संबिधान निर्धारित समय (२०६७ जेष्ठ १४ गते) मै जारी होला?2013: कुन राजनैतिक दलले आगामी संबिधान सभाको चुनावमा बहुमत या सबैभन्दा बढी सिट जित्ला?2013: गैर आवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष को बन्ला?2013: कुन दलको नेत्रित्वमा सरकार बन्ला?2014: एक बर्षमा नयाँ संबिधान बन्ला?2014: एनआरएन अमेरिका (NRN USA) को अध्यक्षमा कसलाई चुन्नु हुन्छ?नयाँ NRN ICC अध्यक्ष को चुन्नु हुन्छ?Vote: Whom you would vote in U.S. 2016 Presidential Election?VOTE: कसलाई भोट हाल्नुभो ? चुन्नुहोस् एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्ष
डा. केशब पौडेल
राम सि पोख्रेल
कसैलाई पनि (नो भोट)
Number of Voters	 : 38
First Vote	 : Wednesday, 06 September 2017 22:41
Last Vote	 : Monday, 11 September 2017 18:34